प्रवास - अमेरिकाको मध्यावधि चुनावमा ह्यारी भण्डारी विजयी - page 3
जागरण पछि आन्तरिक अन्तरक्रियामा कांग्रेस | लोकसेवाको विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा आइतबार सुनुवाइ हुने | प्रकाश सपुत र शम्भु राईवीच सहमति, अब शम्भु राईको नाम पनि ‘गलबन्दी’मा | एसईईको नतिजा बिहिबार प्रकाशित हुने, एक दुई वटा विषयमा आज कपी रुजु गर्ने काम जारी | फेरी करीब तीन अङ्कले घट्यो शेयर बजार
अमेरिकाको मध्यावधि चुनावमा ह्यारी भण्डारी विजयी
काठमाडौं । अमेरिकाको मध्यावधि चुनावमा नेपाली मुलका ह्यारी भण्डारी विजयी भएका छन् । भण्डारी मेरील्याण्ड राज्यको निर्वाचन क्षेत्रनम्बर ८ बाट राज्य सांसदमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार उनी विजयी भएका हुन् । पर्वत जिल्लाबाट सन् २००५ मा उनी अमेरिका आएका थिए । भण्डारी नेपालमा अंग्रेजी भाषा पढाउँथे । अमेरिकामा पनि उनी प्राध्यापन पेशामा नै संलग्न छन् । गत २६ जुन २०१८ मा भएको प्राथमिक चरणको निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक दलका तर्फबाट उनी दोश्रो स्थान हासिल गरी बिजयी बनेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले गैरकानूनी हैसियतमा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीलाई वैधरुपमा सोही देशमै रहन वा स्वदेश फर्कन पाउने व्यवस्था एक महीनाका लागि थप गरेको छ । यसअघि युएई सरकारले गैरकानूनी हैसियतमा रहेका विदेशी नागरिकका लागि गत साउन १६ देखि कात्तिक १४ गतेसम्म लागू हुने गरी तीनमहीने आममाफीको घोषणा गरेको थियो । उक्त आममाफीको समयावधि सकिँदै थियो । आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले गैरकानूनी हैसियतमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई युएई सरकारले दिएको आममाफीको भरपुर सदुपयोग गर्न पुनःआग्रह गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
दक्षिण कोरियामा आङ्कामी शेर्पाको हृदयाघातले ज्यान लियो !
काठमाडौँ । दक्षिण कोरियामा कार्यरत दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ का आङ्कामी शेर्पाको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको छ । हृदयघातका कारण अस्पताल भर्ना भएका ४३ वर्षीय शेर्पाको उपचारका क्रममा शुक्रबार निधन भएको दक्षिण कोरियामा रहेका पत्रकार प्रकाश पोखरेलले जानकारी दिए । मृतक शेर्पा सन् २०१६ मा कोरिया प्रवेश गरी अवैधानिक बसोबास गर्दै आएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का मध्यपूर्व संयोजक आरके शर्मा कतारमा आज पक्राउ परेका छन् । संयोजक शर्मालाई कतार प्रहरीले पक्राउ गरेको एनआरएनएका प्रवक्ता भूषण घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । शर्मालाई पक्राउ गर्नाको कारण भने नखुलेको उनले बताए । प्रवासी नेपालीले दोहामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रमिक शोषणसम्बन्धी नाटक प्रदर्शन गरेका कारण कतार प्रहरीले शर्मालाई पक्राउ गरेको हुन सक्ने उनले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । रियादस्थित नेपाली दूतावासले विभिन्न कारणबाट साउदी अरबमा ज्यान गुमाएका २४ नेपाली कामदारका परिवारले पाउनुपर्ने दुई लाख ७१ हजार ८०७ साउदी रियाल नेपाल पठाएको छ । मृतक नेपाली नागरिकका कानूनी हकदारले पाउने गरी उनीहरुले काम गरेको अवधिको लिन बाँकी रहेको तलब, भत्ता तथा ‘ब्लडमनी’ परराष्ट्र मन्त्रालयको बैङ्क खातामा हस्तान्तरण गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
सिवी अधिकारी क्वालालम्पुर, मलेसिया । वैदेशिक रोजगार भन्नासाथ गाह्रो काम, थोरै कमाइ अनि कैयन वेतिथिका भोगाई हुन्छन् भन्ने नकारात्मक धारणा छ तर विभिन्न मुलुकमा पुगेर काम गर्ने कतिपय नेपाली निकै सान, मान र इज्जतका साथ कमाइ मात्र गर्दैनन् अन्य स्वदेशी तथा विदेशीलाई रोजगारीसमेत दिलाउँदै आएका छन् । तिनैमध्येका एक हुनुहुन्छ, सुनसरी जिल्लाको इटहरीका शम क्षेत्री । जो मलेसियाको चेन होटल ‘होटल ग्राण्ड कन्टिनेन्टल’ मा इज्जतिलो पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । क्षेत्रीय परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत क्षेत्रीले महीनामा रु १६ लाखभन्दा बढी कमाउनुहुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
श्रम सम्झौतामा नेपाल र मलेशियाबीच ‘ब्रेक–थ्रु’ हुदैँ !
काठमाडौँ । नेपाल र मलेशियाबीच हुन लागेको श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल मलेसिया पुगेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं दक्षिणपूर्वी एशिया मामिला महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कविन्द्र नेपाल मलेसिया पुुगेका हुन । टोली बुधबार काठमाडौँबाटै हिडेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
नेपाल र युएईबीच श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति
काठमाडौँ । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईबीच दुवै मुलुकले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सक्ने गरी श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग नेपालका लागि युएईका राजदूत सइद हमदान अल नाक्बीले आज गर्नुभएको शिष्टाचार भेटमा उहाँहरुबीच श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक तयारी गर्ने र छिट्टै प्राविधिक टोली गठन गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सहमति भएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । मलेशियामा विषाक्त मदिरा सेवनबाट थप दुई नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सर्लाही, शङ्करपुर–५ का शेरबहादुर ठकुरी र ठेगाना नखुलेका सुकुवल घिसिङ रहेको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार घिसिङको स्थानीय सुनगाई बुलोच अस्पताल र ठकुरीको टोन्काउ जफार शेरेम्बान अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । यससँगै मलेसियाको सेलाङ्गोर राज्य र क्वालालम्पुर क्षेत्रमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्या नौ पुगेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
जापानमा समेत मनाइयो संविधान दिवस !
काठमाडौँ । संविधान दिवसका अवसरमा जापानको टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले स्वागत समारोहको आयोजना गरेको छ । समारोहमा जापान सरकारका विभिन्न निकाय र अन्य सार्वजनिक संस्थाका उच्च पदाधिकारी, जापानका लागि विभिन्न देशका राजदूत तथा नेपाललाई माया गर्ने जापानी नागरिकका साथै जापानमा रहेका नेपाली समुदायको ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थिति रहेको थियो । सो अवसरमा जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणाले व्यापक सहभागितामा समावेशी, सङ्घीय तथा पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएकाले नेपालको इतिहासमा यो दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए ।	थप पढ्नुहोस्